Ahoana ny fomba hanokafana fisie JNLP | Fikolokoloana biolo
1 Lafiny ankapobeny amin'ny fisie JNLP
2 Fomba fiasa hanokafana rakitra iray miaraka amin'ny extension JNLP ao Windows
3 Ireo fahasahiranana mety hatolotrao mba hijerena ireo rakitra JNLP ao amin'ny Windows
4 Fomba fanao hanokatra fisie misy extension JNLP amin'ny Mac
5 Ireo drawbacks mety ho azonao asehoana hijerena ireo rakitra JNLP amin'ny Mac OS
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana elektronika dia manana rakitra sy rindranasa noforonina tamin'ny endrika maro samihafa. Na izany aza, rehefa tsy misy programa mpamaky iray dia tsy azo atao ny manao fiasa sasany na mijery rakitra sasany avy amin'ny tranokala tianao. Izany no anton'ireo fisie miaraka a Fanitarana JNLP.
Vokatr'izany, ny fampandehanana rakitra JNLP avy amin'ny tranokala (toy ny Google Chrome) dia tsy hanokatra ny fampiharana noho ny antony fiarovana. Izany dia satria ny pejin-tranonkala amin'ny ankapobeny dia tsy mihazakazaka rakitra JNLP amin'ny PC raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitantana azy ireo. Noho izany, etsy ambany, hanazava ny zavatra rehetra mifandraika aminao izahay ny fomba hanokafana rakitra JNLP, na amin'ny Windows na Mac, ka manarona hatramin'ny famaritana azy hatramin'ny lafiny tena misongadina indrindra.
Lafiny ankapobeny amin'ny fisie JNLP
Midika ny JNLP Protokol fanatanterahana tambajotra JAVA ary ampiasaina hitantanana sy hitantanana programa Java amin'ny solosaina na amin'ny Internet amin'ny ankapobeny. Ny rakitra amin'ity karazana ity dia misy fampahalalana mifandraika amin'ny fampidinana ny programa Java ary voatahiry ao amin'ny endrika XML. Ity dia azo zahana amin'ny mpamoaka lahatsoratra.
Androany miasa ny fisie JNLP noho ny a Start Web Java. Izay tsy inona fa rindrambaiko Java mamela anao hampihetsika ny rindranasa sy ny fiasan'ny solo-sainao amin'ny tsindry iray. Anisan'izany ireto manaraka ireto:
Esory ny dingana maharitra sy mankaleo amin'ny fametrahana rindrambaiko.
Izy io dia manome antoka fa ny programa ho tanterahina dia ao amin'ny kinova farany.
Tsarovy fa amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mamaky rakitra JNLP avy amin'ny solosaina miaraka amin'ny rafitry ny Windows na Mac OS. Vokatr'izany, ity karazana fampiharana ity dia tsy manao afa-tsy ny misintona ny kaody ny programa resahina amin'ny solosaina, manomboka avy hatrany aorian'ny fampianarana manan-kery voalohany amin'ny fampiharana azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fisie JNLP dia tsy iza fa ilay nanangana programa Java.
Fomba fiasa hanokafana rakitra iray miaraka amin'ny extension JNLP ao Windows
Manokatra fisie miaraka amina a Endrika JNLP Tsy sarotra ny manao azy, fa mila manaraka ny torolalana sasany fotsiny. Noho izany, etsy ambany dia hanazava amin'ny fomba tsotra sy azo ampiharina amin'ny fomba hanokafana rakitra misy extension JNLP ao amin'ny Windows izahay. Ireto ny dingana toy izao:
Voalohany indrindra, alao antoka fa havaozina i Java ary miasa ao amin'ny Internet browser ampiasainao. Manoro hevitra anao izahay hampiasa ny kinova fanovana farany an'ny tranonkala mba hialana amin'ny olana mifanentana.
Tadiavo izao ilay rakitra Fanitarana JNLP izay tianao hosokafana amin'ny fitaovana elektronikao. Noho izany, tohizo ary sokafy ny browser Internet izay safidinao. Raha Internet ianao dia ampiasao ny Adiresy URL, fa raha tsy eo amin'ny tamba-jotra dia tadiavo ny toerana misy ilay rakitra ao amin'ny PC-nao.
Raha vantany vao vita ny dingana teo aloha dia azonao atao ny manindry ny "Open with". Manaraka izany, haseho anao ny lisitry ny programa izay manohana ny fahafaha manokatra ny fisie miaraka amin'ny extension JNLP.
Ankehitriny ao anatin'ny safidy izay atolotra anao dia misafidy "Start Web Java”Ary miroso amin'ny tsindrio ny“manaiky". Tao anatin'ny segondra vitsy monja dia ho tanterahina soa aman-tsara ny rakitra miaraka amin'ny fanitarana JNLP.
Ireo fahasahiranana mety hatolotrao mba hijerena ireo rakitra JNLP ao amin'ny Windows
Indraindray ianao dia mety tsy afaka mijery na mampiasa rakitra miaraka amin'ilay fanitarana JNLP amin'ny Windows. Noho izany, etsy ambany no hilazantsika ireo fihemorana mety hitranga:
Ny rindrambaiko Java Web Start dia tsy apetraka: Ity programa ity dia tafiditra ao Java Runtime Environment hatramin'ny Java version 5.0. Vokatr'izany, rehefa apetrakao ny rindrambaiko Java, hapetraka ho azy izy io.
Tsy misy fanavaozam-baovao: mila mahazo antoka ianao fa ny rindrambaiko dia havaozina, raha tsy izany dia tokony hanamarina ny kinova farany indrindra ianao.
Start Web Java tsy amin'ny toerana misy anao default: Mety hapetraka sy havaozina ny programa, saingy mbola tsy afaka manokatra rakitra JNLP ianao satria tsy napetraka ho safidy default.
Ahitana lesoka ao amin'ilay rakitra: rakitra miaraka amin'i Fanitarana JNLP tsy hisokatra io raha simba. Raha izany no izy, manandrama manokatra rakitra hafa hanamarinana fa tsy hadisoan'ny programa izany.
Ny rafitra miasa dia tsy mametraka fifandraisana amin'ny fampiharana. Raha izany no izy dia mety mila “Mifanerasera indray”Ny fanitarana JNLP mihazakazaka mamaky an'i Java, izay tsy maintsy arahinao ireto dingana manaraka ireto. Ireo dia:
Voalohany, tsindrio havanana amin'ny rakitra JNLP resahina.
Avy eo azonao atao ny manindry ilay zavatra "fananana”Miraikitra amin'ny menio tontolon-kevitra naroso.
Sokafy izao ny takelaka "General"Izay tokony hisafidiananao ny bokotra voalaza fa"Change”. Izay azonao jerena ao amin'ny faritra "Misokatra amin'ny".
Amin'izay fotoana izay, kitiho ny entana ary tadiavo ny "Fampiharana hafa amin'ity PC ity".
Avy eo mampiasa ny tontonana File Explorer / File Explorer Windows mankanesa any amin'ny lahatahiry misy rakitra azo ampiharina Java
Safidio avy eo ilay rakitra "exe "miaraka amina tsindry roa sosona.
Tsindrio ihany ny bokotra farany "manaiky”Ao amin'ny efijery fananana an'ilay rakitra ary andramo hampandeha azy indray.
Fomba fanao hanokatra fisie misy extension JNLP amin'ny Mac
Iray amin'ireo tanjaky ny programa nosoratana tany Java ny toetrany miampita sehatra. Ireo karazana rindranasa ireo, raha ny marina, dia azo alefa amin'ny rafitra miasa rehetra izay efa napetraka teo a Tontolo iainana Java.
Noho izany, etsy ambany dia hanazava amin'ny fomba tsotra sy azo ampiharina amin'ny fomba hanokafana rakitra misy extension JNLP eo ambaniny izahay IOS tontolo iainana (Mac). Ireto ny dingana toy izao:
Araka ny efa hita ho an'ny Windows, ny zavatra voalohany tokony hatao hanokafana rakitra JNLP amin'ny solosaina Mac dia ny miroso amin'ny fametrahana ny rafitra Java iray manontolo.
Tokony hampifandraisina izao ny pejy fampidinana Java.
Avy eo tsy maintsy tsindrio ny bokotra "Raiso ary tohizo”Manaiky ny fampiasana cookies.
Aorian'izany, kitiho ny bokotra "Java free download"Ary avereno ilay fandidiana amin'ny"manaiky”. Hanomboka ny fisintomana maimaim-poana izany.
Raha vantany vao azo ny rakitra apetraka dia ampandehano amin'ny anao Mac. Noho izany, tsindrio indroa ny kisary fonosana.
Tsindrio izao ny bokotra "misokatra”Ary avy eo soraty ao anaty boaty lahatsoratra voatendry ho amin'izany tanjona izany ny teny miafinao Mac.
Tsindrio ny bokotra "Wizard fametrahana" ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery hanohy.
Amin'ity dingana ity dia tadiavo ny rakitra JNLP izay liana amin'ny fanokafana ary safidio ny topi-maso azy amin'ny fipihana ankavanana. Avy eo amin'ny menio natolotra ary hamafiso ny faniriana hanokatra ny fisie amin'ny alàlan'ny fanindriana "Open".
Raha nandeha tamin'ny lala-mahitsy ny zava-drehetra dia tokony hasehon'ny rafitra ny efijery famintinana eo amin'ilay rindranasa ezahinao hosokafana.
Ary farany, raha mifanaraka amin'ny antenainao ny mpanoratra ny lahatsoratra dia tsindrio ny “Run"Na"Run”Hanomboka avy hatrany ny fanatanterahana ny fisie.
Ireo drawbacks mety ho azonao asehoana hijerena ireo rakitra JNLP amin'ny Mac OS
Indraindray ianao dia mety tsy afaka mijery na mampiasa ireo rakitra miaraka aminy Fanitarana JNLP amin'ny Mac OS. Noho izany, etsy ambany no hilazantsika ireo fihemorana mety hitranga:
Eny, rehefa avy nanandrana sokafy ny rakitra JNLP Manaraka ny torolàlana voalaza etsy ambony dia tsy afaka manokatra rakitra toy izany ianao. Amin'ity tranga ity, ny mpandefa Java. Noho izany, etsy ambany no hilazantsika ny fomba hanaovana azy. Avy eo:
Voalohany, tsindrio havanana amin'ny rakitra JNLP.
Safidio ny entana "Mahazoa vaovao"Avy amin'ny menio tontolon-kevitra naroso ary manitatra ny faritra"Misokatra amin'ny”Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny zana-tsipìka mifanentana amin'izany.
Avy eo, ao amin'ny menio mitete-midina hita etsy ambany, safidio ny singa "More" ary miandry ny varavarankely hisafidy ny programa izay hampiasaina hanokatra ny rakitra.
Amin'izay fotoana izay, afindra ny menio latsaka ambony mankany amin'ilay safidy antsoina hoe “Mac by (ny anaranao)".
Safidio ny "Mac Disk" eo amin'ny ilany havia amin'ny varavarankely ary, amin'ny alàlan'ny takelaka mifanila aminy, mandehana mankany amin'ny folder System> Library> CoreServices.
Safidio avy eo ny fampiharana "Start Web Java”Avy amin'ny lisitra ao amin'ny tontonana ankavanana. Raha tsy voafidy izy dia mandehana any amin'ny setting ary safidio ny safidy "All applications" avy amin'ny menio mitete.
Ny sonia dizitaly mifandraika amin'ilay rakitra dia mety ho diso. Amin'ity tranga ity, azo atao ny manome toky fa ny fanaraha-maso ny sonia nomerika dia tsy tanterahina mihitsy, mba hahafahana manao karazana JNLP fisie tsy manimba ny bibikely mifandraika amin'ny fiarovana.
Ho famaranana, manantena izahay fa ireo fampahalalana mifandraika rehetra ireo amin'ny ny fomba fanokafana fisie JNPL, manampia fanampiana lehibe ho anao. Raha tianao koa ity lahatsoratra ity, dia ampirisihinay hiditra manaraka ity rohy izay hahitanao ireo fampahalalana isan-karazany mety hahaliana anao.
Previous: Previous post: Ahoana no hahitanao ny adiresy IP an'ny olona iray
Next: Next post: Ahoana ny fampiasana Ok Google isan'andro | Ampifanaraho haingana ny fitaovanao
Current [email voaaro] *